Waxqabadka Cimilada si loo taageero Ja Ja, ma aha Blah Blah, Jiilka Cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Awards » Waxqabadka Cimilada si loo taageero Ja Ja, ma aha Blah Blah, Jiilka Cusub
Awards • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • ICTP • News • Dadka • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Shaqaalaha Xarunta Masuuliyadda Socdaalka (CREST) ​​iyo Guddiga Agaasimayaasha ayaa billaabay Abaalmarinta Martha Honey Legacy Award ee sannadlaha ah ee 2019 si ay u noqoto mid lagu aqoonsado qof ka tirsan warshadaha dalxiiska ee caalamiga ah oo isbeddel weyn ku samaynaya riixitaanka baqshadda ee safarka mas'uulka ah.
Abaalmarintu waxay aqoonsataa mudada dheer ee dalxiiska cagaaran ee fikirka leh ee Martha Honey, oo sharafteeda la siiyay.
Martha Honey waa Aasaasaha iyo Agaasimaha Emeritus ee Xarunta Socdaalka Masuulka ah (CREST), oo fadhigeedu yahay Washington, DC.
Labaatankii sano ee la soo dhaafay, waxay wax ka qortay oo casharro badan ka bixisay dalxiiska, saameynta dalxiiska, dalxiiska iyo dalxiiska dalxiiska, isbedelka cimilada, iyo arrimaha shahaadaynta.
Sannadkan, Mr. Geoffrey Lipman, oo ah Aasaasaha SUNx-Shabakadda Caalamiga ah ee Xooggan, iyo Madaxweynaha Shuraakada Cimilada & Dalxiiska Caalamiga ah (ICTP), waxaa lagu dhawaaqay inuu yahay 2021 qaataha 2021 Martha Honey Legacy Award oo ka socota CREST.
Waxaa soo socda hadalladii Mr. Lipman ee ku saabsanaa helidda abaalmarintan qiimaha leh:
Waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo CREST abaalmarintan qaaliga ah iyo inaan aqoonsado dalxiiska cagaaran ee mudada dheer leh fikirka hogaaminta Martha Honey, oo sharafteeda la siiyay. Waan ku faraxsanahay inaan ka ganacsanay fikradaha waqtigii ilbaxnimada badnaa ee horraantii 1990 -meeyadii oo aan ku jirin kala -qaybsanaanta, nacaybka Cudurka, Dunida Trumpian ee maanta. Waxay noo saamaxday inaan ku nimaadno isla arrimo ka yimid aragtiyo kala duwan, oo leh ilbaxnimo iyo asluub.
Waxaan aqbalayaa Abaalmarinta, wax badan uma hayo naftayda, laakiin sida qirashada dhiirrigelinta aan ka helay saaxiibkay iyo lataliye 25 sano, Maurice Strong - joogtaynta iyo u ololeeyaha cimilada nus qarni ka hor.
Waxaana la yaabban waxa uu ka gaaray masraxa adduunka.
Isla Maurice Strong oo abaabulay Shirweynihii Dhulka ee 1972 iyo Shirkii Dunida ee Rio ee 1992 - oo ay la socdeen 124 Madax Dawladeed. Yaa abaabulay dhalashada UNEP, IPCC, UNFCCC, Earth Charter, iyo Ted Turner oo bilyan doolar ugu deeqay UN Foundation. Sidoo kale waxaa la dhihi karaa waxay ku lahayd faraha MDGs, SDGs, iyo Heshiiska Cimilada Paris.
Sida aragtidiisa loogu dhex dubay DNA-da SUNx Malta, oo dhaxal u ah isaga oo ku jira Safarka & Dalxiiska, oo ah NGO fadhigiisu yahay Midowga Yurub, ayaa iskaashi la sameeyay dawladda Malta si uu u hormaro Safarka saaxiibtinimo ee Cimilada.
Fariintayda maanta, ka SUNx Malta, oo ay weheliso mahadnaqdayda dhabta ah ee CREST ee Abaalmarinta, waxay ka kooban tahay saddex qodob.
Mid, Xiisadda Cimiladu waa jirtaa - waxay u baahan tahay inay noqoto diiraddeena koowaad. Waxayna u baahan tahay hadda. Tani waa sanadkii ugu kululaa ee xusuusta dhow, iyada oo saamaynta ugu ba’an ay ku leedahay dunida oo dhan. Jidkeenna qiiqa ee 2030 ee hadda jira waa koror 16 % ah halkii uu ka ahaan lahaa 50 % hoos u dhac loo baahnaa si loogu sii socdo xadka 1.5 darajo.
Laba, Baaqa Dalxiiska ee Glasgow waa tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday, laakiin waa inaan hore u sii soconnaa, si degdeg ah. Waxaan u baahanahay DASH-2-Zero, Carbon Net Zero 2030 halkii aan ka ahaan lahayn 2050 iyo marka la gaaro 2050 (3 sano ka dib) waxaan u baahanahay Maya GHG. DASH waxay u taagan tahay Caddayn: Xeer: Taageero iyo Rajo.
Saddex, rajadayada ugu wanaagsani waa Dhallinyarada, kuwaas oo sida Greta Thunberg sheegtay ay tahay inay nadiifiyaan qaskeenna. Dhalinyarada maanta waa Ja Ja - Haa waan dhalin karnaa. Ma aha blah blah - sida Thunberg ula jeedo annaga. Waxay qaadi doonaan tallaabooyinka adag ee loo baahan yahay si ay ula noolaadaan Xiisadda Cimilada - maxaa yeelay ma foga.
Waana inaan siinnaa Taageerada iyo Rajada ay mudan yihiin.
Sida Innuits -ku sheegaan, "Kuma dhaxalno dhulka aabayaasheen, waxaan ka amaahannaa carruurteena." Mahadsanid
SUNx waa urur ku saleysan Midowga Yurub, oo aan macaash doon ahayn, oo loo aasaasay dhaxalka Maurice Strong, cimilada iyo hormuudka waaritaanka, waxayna iskaashi la sameysay dowladda Malta.
SUNx Malta waxay abuurtay “Nidaamka Socdaalka Saaxiibtinimada leh ee Cagaaran & Nadiif ah, oo loogu talagalay inay ka caawiso Shirkadaha Safarka & Dalxiiska iyo bulshooyinka inay u beddelaan Dhaqaalaha Cimilada cusub. Barnaamijku wuxuu ku salaysan yahay yareynta kaarboonka, la kulanka Yoolalka Horumarinta Joogtada ah, iyo iswaafajinta dariiqa Paris 1.5C. Waa ficil iyo waxbarasho diiradda saareysa-taageeridda shirkadaha maanta iyo bulshooyinka si ay u gaarsiiyaan himilooyinkooda cimilada iyo dhiirri-gelinta hoggaamiyeyaasha dhallinyarada ee berri inay u diyaargaroobaan shaqooyinka abaal-marinta ee dhammaan waaxda socdaalka. Aasaasaha iyo Madaxweynaha waa Professor Geoffrey Lipman.
SUNx Malta waxay ku baaqeysaa DASH-2-Zero oo loogu talagalay waaxda Socdaalka & Dalxiiska ee saameynta leh. Ku riixida ficil dheeraad ah si dhaqso leh. Haa, ilaa Kaarboon Net Zero, laakiin marka la gaaro 2030 iyo ballanqaadka MAYA gaasaska Greenhouse -ka marka la gaaro 2050. DASH waxaa loola jeedaa Ku dhawaaqid & Ku Dhaqan Taageero & Rajo. QORAALx Malta waxay tababar siinaysaa 100,000 oo dhallinyaro ah oo ku guulaysanaysa Cimilada Cimilada oo ku baahsan dhammaan Qaramada Midoobay marka la gaaro 2030. Annaga iyo wada-hawlgalayaashayaga Himilooyinka Horumarinta Joogtada ah (SDG-17), waxaan bixinnaa UNFCCC ku xiran Diiwaanka Hamiga Dardar -galay iyo taageerada shirkadaha iyo jaaliyadaha Cimilada leh.
Wixii macluumaad dheeri ah fadlan la xiriir, Olly Wheatcroft [emailka waa la ilaaliyay]